Semalt: fomba fanao samihafa mba hanefana vohikala manontolo
Ity andro ity natao tamin'ny tanana na tamin'ny alalan'ny fandaharana fandraketana tranonkala. Ny fitaovana enti-manamboatra tranonkala dia haka sy haka ny pejinao mba hijerena azy, ary avy eo dia manaisotra ireo antonta-pehezanteny tsy misy dikany amin'ny kalitaony. Raha mikasa hikorontana tranokala iray manontolo ianao dia tsy maintsy manangana paikady sasany ary mikarakara ny kalitao anatiny.
Ny fanasan-dàlana ataon'ny lehilahy: Ny fomba fanoratana kopia:
Ny fomba voalohany sy malaza indrindra hanodinana tranokala iray manontolo dia ny fanesoana tanana - qualitätssicherung. Tsy maintsy mamaky sy mametraka tranonkala amin'ny Internet ianao ary mametraka azy ho sokajy samihafa. Ity fomba ity dia ampiasain'ireo tsy mpamorona programa, webmasters ary freelancers mba hahazoana data ary hangalany votoaty ao anaty tranonkala afaka minitra vitsy. Amin'ny ankapobeny, ireo hackers dia manatanteraka io paikady io ary mampiasa botsa-be isan-karazany mba hanodinana tranokala iray manontolo na bilaogy marobe.
fomba fanodinana automatique:
DOM na Document Object Model dia fomba iray hafa mahomby hanodinana tranokala manontolo. Matetika izy io dia mifandraika amin'ny rakitra XML ary ampiasan'ireo mpandahateny izay te-hahalala lalindalina kokoa ny angon-drakitra. Azonao ampiasaina ny parsers amin'ny DOM mba hahazoana rindrina misy fampahalalana ilaina. XPath dia mpanao pôlitika DOM izay mamafa ny tranonkala manontolo ho anao ary afaka miditra miaraka amin'ireo browsers amin'ny Internet feno toa an'i Chrome, Internet Explorer sy Mozilla. Ireo tranonkala nopetahana tamin'ity fomba fitsaboana ity dia tokony ahitàna votoaty dynamique ho an'ny vokatra tadiavina.
Aggregation vertique dia tian'ny marika lehibe sy orinasa IT. Ity fomba fampianarana ity dia ampiasaina handinihana ireo tranonkala manokana sy ny bilaogy ary ny angon-drakitra, ary manangona azy ao anaty rahona. Ny famoronana sy ny fanaraha-maso ny angon-drakitra ho an'ny sokajy manokana dia azo atao amin'ny fomba mahazatra. Noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny kalitaon'ny angon-drakitra ianao fa mbola mahagaga foana!
Teny XPath na XML Path Language dia ny fiteny query izay mamoritra ny angona avy amin'ny rakitra XML sy tranonkala sarotra. Satria sarotra ny manadihady ireo antontan-taratasy XML, ny XPath no hany fomba handrindràna ny angona sy ny fitazonana ny kalitaony. Azonao ampiasaina ity teknika ity miaraka amin'ny famakafakana DOM ary mamoaka ny angona avy amin'ny bilaogy sy tranokala.
Azonao atao ny mampiasa Google Docs ho toy ny fitaovana maoderina mahery vaika ary hanangona angona avy amin'ny tranonkala manontolo. Malaza eo amin'ny mpampiasa sy ny tompona tranokala. Ity fomba ity dia mahasoa ho an'ireo izay mikasa ny hikapoka ny tranokala manontolo na pejy vitsivitsy anatin'ny segondra. Azonao atao ny tsy mampiasa ny safidy Data Pattern mba hanamarinana ny kalitaon'ny angon-drakotrao.
Izany dia fomba fanao mahazatra mifandraika amin'ny fomba mahazatra afaka mamoaka tranokala manontolo ao Python sy Perl. Ity malaza ity dia malaza amin'ny mpandrindra sy ny mpandrindra ary manampy ny fampahalalam-baovao amin'ny bolongana sy ny famoaham-baovao.